Soo dejisan Telegram 3.18.1 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Telegram
Telegraam – software ah si ay ula xiriiraan dadka isticmaala adduunka oo dhan. Telegraam awood u ah in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka dagdag ah, la abuuro CHAT kooxda iyo diri files ilaa 1GB. Software ka kooban yahay hab adag oo loo sirta xogta, in kuu ogolaanayaa inaad si ay u hubiyaan heerka ammaanka isitcmaalo waraaqo ah. Telegraam awood u siineysaa inay ka codsiyada kale ugu yeedhi saaxiibo. Software waxay leedahay interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Exchange farriimaha qoraalka iyo files
Heerka sare ee ammaanka waraaqo ah
العربية, English, Español, Deutsch...
Soo dejisan Telegram
Faallo ku saabsan Telegram
Telegram Xirfadaha la xiriira
Tool si aad u daawato video on adeegga caanka ah YouTube. Software ayaa awood u si aad u eegto video ee tayo sare leh oo taageero ah subtitles.
Browser ayaa la daawado raaxo ah websites internet-ka. User waxay leedahay helaan in ay gaadmada ah ee kala duwan iyo modules si loo hubiyo in shaqada tayada browser ah.